China Truck Side Mirror PK9590 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Ny zotram-pifamoivoizan'ny kamiao PK9590 dia mety amin'ny Hino. Ny teknolojia fitaratra fitaratra dia nopetahany Chrome, izay afaka misoroka tsara ny famirapiratanana ary mahatonga ny mpamily hahatsapa ho mahazo aina. Azonao atao ny mahazo "FAW", "DFAC", "Sinotruk", "Shacman", "JAC", "Hongyan", "Auman", "Foton" amin'ny faritra hafa eo amin'ny tsena. "Serivisy fividianana fivarotana iray": Teny nalaina - Fiomanana - Fanaterana. Miaraka amin'ny traikefa 10 + taona, Mahay amin'ny fizotran'ny fitantanana orinasa izahay .amin'ny rafitra faritra Sinotruk, afaka mahazo ny mombamomba ny marina izahay araka ny chassis no sy ny fiangonana nameplate, ny tahan'ny marina dia mahatratra 95%.
Teo aloha: Fiara fitateran'ny kamiao PK9512
Manaraka: Fiara fitateran'ny kamiao PK9592